Umngeni eyeth27 09 13 indd by uMngeni Eyethu - issuu
WE CONSOLIDATE FROM R20 000 TO 5 MILLION AGENTS NEEDED
uMngeni Eyethu-27 September 2013
IZOBUYA IMALI KAMASIPALA EHILTON _______________________ Mfundo Mkhize ZIBALIWE izinsuku kumphakathi waseHilton ukuba ukhokhe yonke imali kagesi. Isigungu esiphezulu sikamasipala (council sitting ) waseMngeni kulindeleke ukuba siphasise isinqumo sukuba umasipala uthole yonke imali yezikweletu zikagesi
njengoba ikomidi eliphezulu lenze lesincomo. Lendawo yabadla izambane likapondo kuvele ukuthi ikweleta umasipala woMngeni imali engaphezu kwesigidi samarandi (R1,2 million). Lokhu kuvezwe iMenenja kaMasipala uDkt Mpilo Ngubane. “Ukuze sifinyelele kuso lesinqumo silandele yonke imigudu ekhona
okubalwa kuyo yoMnyango wezeziMali,” kuchaza uNgubane. Uthe umasipala uhlele ukuba ubhekane ngqo nalabo bantu okungukuthi izikweleti zabo azikadluli esikhathini esiyizinsuku eingama-30. “Iningi lalaba yilabo abakweleta umkhandlu kangangoba izikwetu zabo sezidluliselwe kubammeli bakwa masipala,” kusho uNgubane.
Indawo yase Hilton yaziwa kakhulu njengendawo okuhlala kuyo izinjinga ezingomacaphuna kusale, osopolitiki abaqavile, kanye nezikhulu zikahulumeni nezezinkampani. Uqhube wathi phambilini bekuyinkinga indaba yokuba umasipala uzibhekele wona uzikweletu zikagesi njengoba ingxenye eningi yakulendwo
yase Hilton iphakelwa umasipala waseMsunduzi. Uveze ukuthi kuyaye kube lukhuni nokuvala wona ugesi njengoba uMsunduzi kuyiwo ogunyaziwe ukuba uvale ugesi. Lezi zindaba ziza emva kokuba uMngeni usayinde isivumelwano sikagesi esaziwa ngokuthi iservice level agreement (SLA) kuyo yona lenyanga. UNgubane uthe lesi sinqumo sizoqinisekisa ukuthi yonke imali ekweletwayo ibuyela kumkhandlu. Uqhube wathi uMsunduzi uzothola izimali zokuvalwa kanye nokuvulwa kuka gesi kubantu abakweletwayo. Uthe umkhandlu uzimisele ngokuba ubhalele labo asebehlulekile ukukhokha ukuze baziswe ngale SLA kanye nemibandela yayo.
KUKHISHWE AMALOLI AHLOBENE NELENZA INGOZI NgeSonto kukhishwe amaloli amathathu emgwaqweni asenkampanini yeloli elisanda kubanga isibhicongo sengozi eyadlula nemiphefumulo engama-23 ePinetown. Lokhu kuqinisekiswe okhulumela ungqongqoshe woMnyango wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi uMnuz Kwanele Ncalane emva kokuba lamaloli ehloliwe. Emva kwengozi, umshayeli weloli uMnuz Sanele May (23) emva kokuboshwa kwakhe kwatholakala ukuthi iloli ayehamba ngalo lalingekho isimweni sokuba semgwaqweni futhi nezincwadi zakhe zemvume yokushayela bese ziphelelwe yisikhathi. ISILO SIKHALA NGAMALUNGELO ISilo samabandla sikhala ngokuqhakambiswa kwamalungelo nesithi lokhu kunomthelela wokunyamalala kwenhlonipho ikakhulukazi entsheni. Sikhulume kanje ngesikhathi kunomcimbi obusesikhumulweni sezindiza iKing Shaka, odume ngeZulu 200, uMgidi weLembe. Siphinde sagcizelela ukuthi umthetho wamalungelo abantu yiwo odukisa intsha njengoba nje futhi kugqanyiswa ukuthi abashaya izingane bayaboshwa.
KUMENYWA ABANTU BESILISA BASE HOWICK INHLANGANO yamadoda eyaziwa nge Men’s forum ngaphansi koMngeni imema bonke abantu kusigcawu sokuthula lenhlangano ngokusemthethweni mhla zingu6 enyangeni ka Okthoba 2013. Lomcimbi ozokuba ezinkundleni zemidlalo zaKwaMevana kusukela ngo 09:00 ekuseni. Lesi sigcawu sihlelwe ngaphansi kwesiqubulo esithi “Men’s Health/ Indaba” . Lesi sigcawu sihlelwe ukuba sibuyisele ukuzithemba kubantu besilisa bakuleli dolobha.
ENYE INDABA NGOKUPHUMELELA KOMLAPHI ONAMANDLA UMANDLA ZAMA KHANYILE (46 YRS) - LUNDI Ngemuva kokufunda ubufakazi buka Phindile Msomi ngomelaphi onamndla amakhulu uMandla nezinto azenzile, ngahlela ukubona naye, wangikhokhisa u-R100 ngingakasho lutho wangitshela igama lami nezinkinga zamai, wabona nokuthi ngiphatheke kanjani ngobudlelwane bami nomyeni wami owayeselungiselela ukukhokha ilobolo kwenye intombazane, wangibonosa nasesibukweni zonke izinto eyayizenza ngabona nobuso bayo. Wangikhulekela qede wanginika amafutha, ezinsukwini ezine (4) bahlukana nelobolo kwangaphumelela labhuntsha, umyeni wami useyangithanda manje uyangihlonipha kakhulu.NGIBONGA KAKHULU KUMANDLA, NGIZOTSHELA UMHLABA WONKE NGAMANDLA AKHE, UMA NAWE UKHATHAZEKILE ENGAKUSIZA UNGABE USAHLUPHEKA, NAKHU OKUNYE ANGAKUSIZA NGAKHO: INHLANHLA, UMSEBENZI, UKUBHEKANA NGQONEZITHA ZAKHO, IMPILO NEZOCANSI UBEYINDODA, IZINKINGA ZEMALI NOKUNYE. UBUYE AQEQESHE ABANTU NGOKUBHULA NGENDUKU YOMLINGO ESEBENZA EKUNGEMBULENI NASEKUZIVIKELENI. UKWAZI UKUKUKHOMBISA IZITHOMBE ZEZITHA ZAKHO BUKHOMA ESIBUKWENI MESE ENZA IZIMANGA NGAZO!
Uma unesi多so sokubona uMandla shayela umabhalane wakhe ku060 320 4211 uyatholakala eScottsville opp nandos (PMB) kanye nase (Durban central)
Umn 27 September 2013
ASIZIBAMBELE MATHUPHA NGOKUBONA KWAMi Jerry Barnes
UMA kusathiwa kukhona imiphakathi yethu lapha kwelikaMthaniya esahluleka ukudlala futhi esahlushwa ubugebengu nezidakamizwa ngizothi iyazenza. Iqiniso lithi uma ufuna ukukhipha oshampeni babashayi sibhakela (boxers), abagijimi (athletes), abadlali bebhola (soccer players) noma yini ungayenza eWadini langakini noma emphakathini wakho. Ngokubona kwami nangokwazi kwami, amathuba asevulekele noma ubani futhi iminyango efana no-Department of Sports and Recreation ifuna ukubona izingane zethu nemiphakathi yethu idlala. Ngokubona kwami, uma izingane zidlala nomphakathi wonkana, kulukhuni ukuthi uSathane nobugebengu bungene. Inkinga iqala uma kuthule nje emiphakathini yethu, nabantwana bengakhelwa amathuba okudlala. Ngivumele noma ungiphikise, ayikho intsha noma umphakathi ongavumela izigebengu ziphazamise umphakathi uma ufuna ukudlala. Isikhathi sokuncomana nezikhothane, nemigulukudu, ama- gangsters, namaginsa emalokishini ngeke savela uma kuhlangenwe ngenhloso eyodwa yokuthuthukiswa imiphakathi noma isizwe. Uma ngakini mfundi wami omuhle kungadlalwa noma imidlalo yamawadi
noma amalokishi ingekenzeki, nikela kumasipala wakho wasekhaya noma kwikhansela lakho ubuze ukuthi kubambeni. Awukho umasipala noma ikhansela elisile nelaziyo ukuthi umphakathi walo ufunani onganqabela imidlalo, noma-ke nje into enhle endaweni. Kulezi-zinsuku ngike ngaba nenye inhlanhla yokuhambela amanye amadolobha namakolishi alapha eKZN, ikakhulukazi ngaseThekwini namaphethelo eMgungundlovu, njengako -Howick, Mooi River nase Richmond. Cishe bonke abantu engihlangane nabo bebekhala isililo esisodwa, ukuntuleka kwezemidlalo nobugebengu obungasanqandeki. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi nginephutha, kodwa ngokubona kwami, awukho umphakathi ongeke ukwazi ukudlala. Azikho futhi izigebengu ezingahlula umphakathi uhlangene, nekhansela lawo nomasipala wawo namaphoyisa endawo. Uma konke lokhu kuhluleka kusho ukuthi awukho umsebenzi wekhansela nowamaphoyisa. Kodwa mina ngithi azikho izinhlaka zonke zomphakathi nezikuhulumeni ezake zahlangana zahluleka ukudlala futhi zahlulwa nayizigebengu. Kuyathokozisa-ke nokuthi lapha eMzansi uhulumeni wethu uyakwazisa ukuphepha kwemiphakathi yethu. Okokugcina ngasezwini lokudlala ,iDepartment of Sports and Recreation ayikaze ixoshe muntu ofuna ukwazi ukuthi angasizwa kanjani uma efuna ukudlalisa umphakathi wakhe noma aqale uchungechunge lwezemidlalo. Okwanamhlanje angithi khumu bafundi bami abahle. INkosi ithele umusa- Stay Blessed!
KUZOCACA NGEMPELASONTO KWABAZOPHATHA I-SAFA _______________________ Jerry Barnes INHLOKO ibhekeke ukuba ihlukane nesixhanti namaphupho aphele okhethweni olubhekwe ngabomvu yizwe lonke kwabazophatha i-Safa. Lolukhetho luzobanjelwa ngoMgqibelo eGoli- Sandton lapho kubhekeke khona ukuba kushube. Kusobala-ke futhi ukuthi izinto azibhekekile nje ukuthi zishube, kodwa nemimoya ingaphakama ngalo usuku lokhetho ngenxa yepolitiki edida ikhanda, nokushintsha kwezinhliziyo nezifiso kanye nemithetho yokhetho. Okuthokozisayo nokungabuyisa amathemba ngalolukhetho ukuthi bonke abathandi bebhola bafuna ubumbano nenqubekela phambili futhi sebekhathele yipolitiki engayisi ndawo izwe laseMzansi. I-Eyethu ike yalumana indlebe nabahlaziyi nabadlale indima ebalulekile ebholeni ezindimeni ezehlukene nasemazingeni ahlukene. USihlalo we-Sascoc u-Gideon Sam uthe usuku lwangoMgqibelo olubaluleke kakhulu hhayi kwi-Safa kuphela, kodwa ezweni lonke ngoba abakhethiwe bayobe bephethe amathemba oMzansi wonke nekusasa lebhola. U-Sam uthi yena uthandazela ubumbano futhi ufisela abazongenela ukhetho inhlanhla kodwa kufanele baqonde ukuthi bazobe besebenzela isizwe nokuthuthuka kwebhola sekuyoba ezandleni zabo.”Thina njengo-Sascoc sithi ndlela –nhle kubafowethu abazokhethwa. Siyathemba ukuthi ubumbano nemimoya yokubekezelelana yikona okuyoletha
ikusasa elihle neliqhakazile ebholeni. Siyifisela inhlanhla i-Safa okhethweni lwayo.” Ingqalabutho yebhola lezikole nesikhulu esesimnkantshubomvu ebholeni lesifundazwe saKwaZulu- Natali uMazwi Mkhize uthe kusebuhlungu futhi kunyantisa nomzimba ukuthi namanje kusekhona amadoda asacabangela udumo nezikhundla kunokuba kusetshenzelwe isizwe. “Uma udinga abaholi abazothatha ibhola balibeke ezingeni naseqophelweni elifanele, bayaziwa futhi basobala. Inkinga nje ukuthi ibhola lethu selaxutshwa nepolitiki nokuthanda izikhundla nemali okwenza uzibuze ukuthi kanti kusayiwelani okhethweni uma kuzobuye kudlalwe ukop’daysi. Mina ngithi uma izikhulu zineqiniso zifuna nebhola lethu likhuphuke ngokwezinga, bayazi ukuthi kufanele benzeni. Izikhulu ze-Safa ikakhulukazi lezi ezisekomidini eliphakeme (executive committee) nama-Region bayabazi abantu abangasebenzela izwe kodwa kufanele abanye babo ngamadoda basukumele iqiniso nento eqondile nesobala. Yiqiniso, ubumbano nomoya wesonto oyosindisa i-Safa nebhola laseMzansi,” kusho uMkhize. Omunye wezikhulu ze-Safa noke abhekelele ezophiko lomthetho nokuphathwa, u-Poobie Govindasamy uthe izwe nama-region azokhuluma futhi akukaze kusize ukulokhu kukhonjwana ngeminwe kuchithwa isikhathi ngokusolana. Uthi ukhetho alunikwe ithuba luhambe kahle. “Akusona isikhathi lesi sokukhuluma kodwa akuzothwe kuhlonishwe ukhetho oluzayo.”
Umngeni eyeth27 09 13 indd